Magaalo Dutch ah oo Adag iyadoo loo marayo Faafida iyo Beyond • Dutchtown, St. Louis, MO
Magaalo Dutch ah oo Adag Iyadoo loo marayo Faafida iyo Beyond
Ku noqo deeq bixiye DT2! Doolar kasta wuxuu caawiyaa DT2 • Bartamaha Magaalada Dutchtown ee ku wajahan hadafkeena ah dhisida magaalo horumarsan oo Dutchtown ah dhammaan dadka deggan, milkiileyaasha ganacsiyada, iyo daneeyayaasha kale.
DT2 sidoo kale waxay hadda bixinaysaa fursad ay ku sameyso deeqaha bil kasta soo noqnoqda! Dhagsii badhanka "Sii wadida Deeqaha" waxaan si otomaatig ah u heli doonnaa intaad dooratay bil kasta.
Waxaa lagu geynayaa websaydhka DonorBox ee tab ama daaqad gaar ah si aad u dhammaystirto deeqdaada adoo adeegsanaya kaarka deynta, wareejinta bangiga (ACH), ama PayPal. Mahadsanid!
Ma tabaruci karo hadda? Ku soo noqo Dutchtownstl.org/donate wakhti kasta si aad u dejiso deeqdaada joogtada ah.
Waxaad ka akhrisan kartaa dib-u-eegistayada 2020 iyo qorshayaasha 2021 hoosta, ama ku soo degso buug-yaraheena qaab PDF ah.
Dhisida magaalo xoog leh, firfircoon, adkeysi leh, isla markaana horumar leh oo ku taal magaalada Dutch ee deriska iyo ganacsiyada maxalliga ah
Ma jirto wax diidaya in 2020 uu ahaa sanad dhib badan. Dhibaato caafimaad oo aan horay loo arag iyo hoos u dhac dhaqaale oo ka dhashay ayaa si xun u saameeyay dadka iyo ganacsiyada yaryar.
Faafida COVID-19 ayaa carqaladeysay nolosha qof walba. Iyadoo taasi jirto, Bartamaha Magaalada Dutchtown sii waday dhisida xaafad Dutchtown ka xoog badan. Labada DT2 iyo xaafada labaduba waxay dhisayaan waddo horay loo socdo iyo dhismo xawli ah oo aan si kale loogu arkin Dutchtown tobanaankii sano ee la soo dhaafay.
2021 waxay umuuqataa mid dhalaalaya. DT2 waxay diyaar u tahay inay qaaddo caqabado cusub, soosaarto xalal, iyo in kabadan sidii hore iyadoo hanuun cusub lagahelayo Hindisaha UrbanMain, cusbooneysiiyay xiisaha deriska, iyo cusub shaqaale heegan ah.
Maanta waxaan weydiisaneynaa caawimaad si aad u sii wado himilada DT2 ee kor u qaadista bulshada kobcaysa iyo barwaaqada la wadaago iyadoo la fududeynayo horumarinta dhaqaalaha iyo kobcinta fursadda xaafadda Dutchtown. Hadafkan, waxaan higsaneynaa inaan soo jiidanno lahaansho kala duwan, kor u qaadno meelaha, meelaha, iyo wajiyo, iyo kordhinta deganaanshaha.
Sanadka 2021, waxaan dooneynaa inaan horumarino saldhig adag oo deeq-bixiyeyaasha joogtada ah si ay nooga caawiyaan inaan gaarno himiladeenna oo aan u dhisno magaalo xoog leh oo Dutchtown ah qof walba. Hadafkeenu waa inaan aruurino $ 10,000 sanadkiiba deeqaha joogtada ah. Qaadhaankaaga billaha ah oo ah $ 10, $ 25, ama $ 100 waxay aadeysaa waddo aad u fog oo aan ugu jeedno ujeedkeenna.
Way fududahay inaad dejiso deeqdaada bil kasta soo noqnoqota. Riix halkan.
Ku darsigaaga ayaa noo oggolaanaya inaan sii wadno oo aan ballaarinno barnaamijkeenna adag, oo ay ku jiraan shaqadeenna Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri iyo Hindisaha UrbanMain, dib u howlgelinta Beerta Marquette, ololaheena ah in taageero dheeri ah loo fidiyo ganacsiyada xaafadaheena, iyo waxyaabo kaloo badan.
In kasta oo DT2 ay si iskaa wax u qabso ah u kaxaysay tan iyo markii la aasaasay, haddana 2020 waxaan awoodnay inaan shaqaaleyno shaqaale waqti-dhiman ah oo naga caawiya ballaarinta dadaalkeenna. Kuweena Maamulaha Kobaca Dutchtown waxay keeneysaa xirfado iyo waayo-aragnimo naga caawin doonta inaan codsanno deeqaha, kordhinno iskaa wax u qabso, dhiirrigelinta xaafadda, iyo inaan ugu adeegno bulshada Dutchtown sidii hore oo kale. Ku deeqidaada joogtada ahi waxay naga caawineysaa inaan sii dhigno aasaaska aan ku dhiseyno adkeysi iyo horumar Dutchtown ah. Fadlan noqo deeq bixiye waara maanta.
Hindisaha UrbanMain ee Dutchtown
Afarta Qodob ee UrbanMain (oo lagu daray hal)
Nadiif & Cagaar aamin ah
DT2 waxay la shaqeysay Missouri Main Street iyo Dutchtown CID si loo sameeyo a qaab dhismeedka guddiga cusub oo u dhiganta mid kasta oo ka mid ah shanta qodob. Guddiyadu way u furan yihiin dhammaan. Waxaad ka heli kartaa wax dheeraad ah oo tabaruc ah dutchtownstl.org/committees.
DT2 wuxuu iskaashi la sameeyay Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri barnaamijkii ugu horreeyay noociisa ah ee gobolka. Dadaalku wuxuu adeegsanayaa qaab afar qodob ah oo lagu guuleystay in dib loo soo nooleeyo magaalooyinka taariikhiga ah ee magaalooyinka dalka oo dhan waxaana lagu darayaa qodobka shanaad si wax looga qabto baahida xaafadaha magaalooyinka sida kuweena oo kale. Shanta qodob waa Abaabul, Muhiimad Dhaqaale, Dhiirrigelin, Naqshadeyn, iyo Nadiif Nadiif ah & Cagaaran.
Wadashaqeynta Missouri Main Street waa mashruuc seddex sano ah oo diiradda saaraya Downtown Dutchtown kaas oo dib u soo nooleyn doona xudunta xaafadeena isla markaana ka caawin doona DT2 inay soo saarto istiraatiijiyado lagu hirgaliyo dhamaan xaafada Dutchtown
Firfircoonida Marquette Park
In kasta oo awoodda in lala ururiyo deriskeenna ay xaddiday COVID-19, DT2 waxay la midowday ururrada kale ee Dutchtown si ay dadka isugu keento Beerta Marquette howlaha sida Habeenada Filimka.
Intaa waxaa sii dheer, iskaashi ayaa lala dhisay Kooxda cusub ee Kubadda Cagta ee 'St. Louis' si loo kafaala qaado hagaajinta garoonka kubada cagta lana dhiso maxkamad futsal ah sanadka 2021. Futsal wuxuu la xiriiraa kubada cagta laakiin wuxuu ku ciyaaray garoon yar.
Maaha Ganacsi Sida Caadiga Ah
Dutchtown waxay soo dhaweysay dhowr cusub oo dib loo habeeyay ganacsiyada sanadkii la soo dhaafay. In kasta oo dhibaatada caafimaad ee joogtada ah iyo hoos u dhaca dhaqaale, ganacsatadu waxay maalgashadeen lacagtooda iyo waqtigooda si ay ula socdaan riyadoodii Dutchtown.
Cunista Magaalada waxay bilaabeen fikradahooda jikada la wadaago iyo fikradaha cuntada ee xaafadda. Qadeeyayaashu waxay ku soo xoomeen maqaayadaha cusub ee laga cuno magaalooyinka. Nafta Juanita ee Creole waxay heshay amaan weyn oo naftooda ah iyadoo la maroojinayo. Tacos La Jefa waxay uga soo adeegeen adeegidooda bircos tacos iyagoo ka yimid daaradooda una adeegayay khadadka macaamiisha ee lebenkooda iyo hoobiyeyaashooda. Iyo Cunto macaan waxay bixisaa kafeega subaxa, keega, iyo macmacaanka, meel aad u dheer oo aan deganeyn Dutchtown. Down Virginia Avenue, Shay's Donuts sidoo kale waxay u keentaa daawooyinka quraacda xaafadda, waxaana ka socda xaruntii hore ee loo yaqaan 'Iron Barley' si dib loogu celiyo maqaayada cusub.
Naga caawi taageerida ganacsiga Dutchtown.
Ku deeqidaada DT2 waxay naga caawineysaa soo jiidashada, kobcinta, iyo kobcinta ganacsiyada xaafadeena. Samee deeqdaada joogtada ah maanta.
Dukaamo cusub ayaa sidoo kale yimid Downtown Dutchtown sidoo kale. Dadka cusub waxaa ka mid ah Kwamboka, dukaan lagu iibiyo dharka, hadiyado, iyo badeecooyin kale; Ha i iloobin aniga oo aan ahayn Boutique, oo ku takhasusay dharka cusub ee haweenka, agabyada, iyo daryeelka jirka; iyo Melanin waxay sameysay Qurux, iibinta timaha iyo alaabada quruxda iyo waliba dhar kala duwan oo iib ah. Dukaamo cusub oo timo jare iyo qurxiyo qurxin ah ayaa laga furay Meramec sidoo kale. Iyo Isgoyska Grand aasaasay ay leben cusub iyo goob hoobiye ah. Meheradda, oo ay maamusho dadka deggan Dutchtown, waxay bixisaa sawir qaadis, sawir qaadis, qorsheyn dhacdo, iyo inbadan.
Ganacsiyo la aasaasay ayaa horay loogu sii waday faafitaanka sidoo kale. Downtown Dutchtown saw Dukaankii Diana ku ballaadhi meel ballaadhan oo ku taal Meramec isla markaana la shaqayso Dhaqale $ #! & si loo siiyo fursad shirkad bilow ah. Ku Makhaayada Crusoe Asalka ah ayaa ciidan ka ahaa sanadkii 40-aad, iyaga oo ka dhigaya fasaladooda maadooyinka gawaarida iyo fadhi xaddidan ee cuntada. Iibinta Carruurta Logan bixiyaa fursadaha shopping dalwaddii macaamiishooda. Ganacsiyadeena xaafadaheena waxay sii wadaan inay la qabsadaan xaalad marba marka ka dambaysa isbedelaysa, iyagoo siinaya alaabada iyo adeegyada jaarkayagu u baahan yihiin iyagoo waliba ilaalinaya ammaankooda
In kasta oo ganacsiyadeenna badan ay dhib la soo derseen muddadii uu cudurku socday (sidoo kale ganacsiyada waddanka oo dhan), haddana waxaan ku faraxsanahay inaan aragno in badan oo ka mid ah goobahan si dhaqso leh u buuxsamaya. Ganacsadayaashu waxay fursad ugu arkaan Dutchtown, waxaanan mustaqbalka ku dhiirrayn doonnaa ganacsiyada deriskeenna ah ee dhismay iyo kuwa cusub.
Ku soo dhowow Dutchtown, oo ah xaafad culeyskeedu yahay
magaaladeenii tagtay oo taagan tahay runta cidda aan maanta nahay. Waxaan nahay St. Louis xaafada ugu dadka badan uguna cufan. Waxaan nahay xaafad soo martay koritaan, foosha, iyo koritaan markale. Waxaan nahay Dutchtown Proud.
Waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka nahay mid ka mid ah xaafadaha ugu kala duwan, qaddarinta badan, iyo fikirka hore ee St. Ku faan hanashada barwaaqada halkan. Ku faani inaad u sheegto kuwa ka shakisan sababta aan ugu yeerno Dutchtown home.
Noqo deeq bixiye waara
Ku muuji Kibirkaaga Dutchtown a deeq bille ah ilaa DT2. Joogtaynta deeqbixiyeyaashu waxay helayaan calaamad yar oo Dutchtown Proud yard!
Waxaan ugu yeernaa guriga Dutchtown xulasho ahaan. Waxaan dooranay inaan isu nimaadno oo aan jaaliyad ka dhisno deriska kuwaas oo laga yaabo inaysan u muuqan ama ku noolaan noloshooda si isku mid ah. Waxaan ixtiraameynaa xuquuqda deriskayadu u leeyihiin inay doortaan Dutchtown, iyadoon loo eegin cidda ay yihiin, cidda ay jecel yihiin, sida ay u eg yihiin, waxay ku noolaadaan, ama duruufaha halkaan keenay.
2020 ayaa calaamadeeyay kicitaankii Dutchtown Faan olole xaafadda oo dhan. Iyada oo deeq ka timid Jaaliyada St. Louis ee Ururada Bulshada (SLACO), waxaan daabacnay oo u qaybinay boqolaal calaamadaha ardaaga si aan ugu muujino sharaf xaafadeed iyo midnimo bulshada oo dhan.
Waxaan sidoo kale soo saarnay fiidiyow tilmaamaya waxa naga wada dhigaya inaan nahay degganeyaal iyo milkiileyaal ganacsi oo ku yaal Dutchtown. Fiidiyowga waxaad ka heli kartaa Dutchtownstl.org/proud.
Qorshayaal Waaweyn 2021 iyo wixii ka dambeeya
DT2 iyo xaafada Dutchtown waxay ku guuleysteen 2020 inkastoo ay la kulmeen caqabado aan horay loo arag. Maalgashiga ayaa sii kordhaya, xiisaha xaafada waa mid sareeya, waxaanan leenahay aasaas fantastik ah iyo la-hawlgalayaal si aan ugu dhisno bulsho firfircoon oo sinaan ku leh Dutchtown sannadaha soo socda. Laakiin shaqadeennu hadda uun bay bilaabantay.
Waxaan kaa codsaneynaa kaalmadaada si aad nooga caawiso sii wadida hadafkeena 2021 iyo wixii ka dambeeya. Qaadhaanka billaha ah ee $ 10, $ 25, ama $ 50 wuxuu naga caawinayaa inaan la imaanno ilo iyo dib-u-maalgelin Dutchtown oo aan u qorsheynno mustaqbal ifaya dhammaan dadka deggan iyo milkiileyaasha ganacsiyada. Noqo deeq bixiye waara maanta.
Ajandaha DT2 ee 2021
The Hindisaha UrbanMain waa barnaamij saddex sano ah kaas oo aan si dhow ula shaqeyn doonno shaqaalaha xirfadleyda ah ee Missouri Main Street Connection si loo hirgeliyo Habka 4 + 1. Wax dheeri ah ka baro dutchtownstl.org/urbanmain.
Taageer Ganacsiyada Dutchtown
Dabayaaqadii 2020, waxaan bilownay dadaal cusub si inaad la xiriirto ganacsiyada cusub ee hadda jira ee Dutchtown iibinta iyo bixinta macluumaadka. Waxaan sidoo kale bilaabaynaa dhacdooyinkeena DT2 Saacadaha Kahor - saacadaha kafeega ee milkiileyaasha ganacsiyada siinaya fursad ay ku kulmaan, ku xiriiraan, kuna wadaagaan kheyraadka. Wixii intaas ka badan waxaad ka heli kartaa dutchtownstl.org/business.
DT2 Saacadaha Kadib
DT2 Saacadaha Ka Dib, saacadahayaga billaha ah ee farxadda leh ee aan ku taageerno ganacsiyada xaafadaha, ayaa dib loo bilaabi doonaa guga 2021. In kasta oo nabadgelyadu ay noqon doonto welwelka ugu horreeya, waxaan aaminsanahay inay weli muhiim tahay inaan sii wadno isu keenidda bulshadeenna oo aan u soo jeedinno kuwa cusub iyo kuwa ganacsiyo dhisan. Isha ku hay annaga Kalandarka Dutchtown wixii dheeraad ah Saacadaha Kadib iyo dhacdooyinka kale.
Habeennada Filimka ee Marquette Park
Waxaan sidoo kale bilownay qorshaynta sanadkii saddexaad ee xagaaga Habeennada Filimka ee Marquette Park. Habeennadeena Filimku waxay boqolaal deris ah keeneen jardiinada loogu talagalay madaddaalada saaxiibtinimada qoyska, gawaarida cuntada, abaabulka bulshada, iyo inbadan. Ka eeg jadwalkayaga dutchtownstl.org/movienight.
Wadashaqeynta Ururada Dutchtown
DT2 way sii wadi doontaa inay si dhow ulashaqeyso Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown si kor loogu qaado loona hagaajiyo marinka muhiimka ah ee mara bartamaha xaafadayada. Ka dib markii aan caawiyay sameynta CID sanadka 2017, waxaan ku faraxsanahay inaan aragno dadaalkeena oo mira dhal u leh hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta istiraatiijiyado cusub oo ku saabsan amniga, qurxinta, iyo dhiirrigelinta.
The Xarunta Hal-abuurka Xaafadda wuxuu ahaa lamaane aan la qiimeyn karin sanadkii la soo dhaafay, isagoo siinaya meel si nabadgelyo leh loogu soo ururiyo dhacdooyinka bannaanka, teknolojiyadda lagu qabto shirarka fog, iyo noqoshada xarunta bulshada ee rasmiga ah ee Dutchtown maaddaama ay sii wadaan horumarinta himilooyinkooda muddada-dheer ee abaabul. Ku NIC waxay qayb muhiim ah ka noqon doontaa dhismaha bulshada ee Dutchtown.
Waxaan sidoo kale higsaneynaa inaan xoojino xiriirkeena Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown maaddaama ay marayaan kala-guur hoggaamineed inta ay sii wadaan dadaalkooda ay ku xoojinayaan dadka deegaanka, bixinta guryo la awoodi karo, iyo hirgelinta Qorshaha Xaafadaha Gravois Jefferson.
Ururada sida Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada, Xiriirka Shaqada, iyo barnaamijka Rabshadaha Daaweynta, iyo sidoo kale iskuulada xaafadaheena iyo jameecadayada iyo saraakiisha aan dooranay dhamaantood waxay fadhiisan doonaan miiska agtiisa dadkayaga degan iyo milkiileyaasha ganacsiyada si loo hubiyo in shaqadeena ay u sii socoto hagida codad kala duwan oo ka socda gudaha. bulshada Dutchtown.
Taageer DT2 Maanta!
DT2 waxay muddo dheer ku shaqeyneysay kaliya kabaha kabaha iyo shaqaalaha iskaa wax u qabso. Sannadkan, waxaan rajeynaynaa inaan shaqadeenna u qaadno heerka xiga.
Anaga iyo maareeyahayaga cusub ee kobaca Dutchtown iyo shaqadeena aan la leenahay ururada sida Missouri Main Street Connection, fursadaha iyo ilaha hore ee aan noo helin ayaa imanaya.
Laakiin hadda, waxaan u baahanahay lacag si aan u sii wadno shaqadeena socota ee dhismaha bulshada iyo kor u qaadista xaafadda Dutchtown iyada oo loo marayo suuqgeyn, dhacdooyin, iyo wacyigelin kale.
Himilada Lacag-ururinta ee DT2 ee 2021: $ 10,000 oo ku-meel-gaadh ah Deeqaha
Waxaan fududeynay inaan sii wadno taageeradaada DT2 · Downtown Dutchtown. Si fudud u tag Dutchtownstl.org/donate halkaas oo aad dooran karto inaad sameyso a soo noqnoqda ama ku deeqid hal mar ah. Deeqaha soo noqnoqda ayaa si otomaatig ah loogala bixi doonaa koontadaada bil kasta.
Iyadoo kudhowaad $ 3,000 horeyba loogu heley sanadka 2021, waxaan gaari karnaa yoolkeena markii 25 qof oo dheeraad ah ay ku deeqaan $ 25 bishii. Laakiin tabarucaadka nooc kasta ha noqdee si weyn ayaa loo qiimeeyaa oo waxaan aadnaa waddo dheer oo aan ku caawineyno DT2 inay sii wado himiladeena muhiimka ah ee kor u qaadista bulshada kobcaysa iyo barwaaqada la wadaago iyadoo la fududeynayo horumarinta dhaqaalaha iyo kobcinta fursadda xaafadda Dutchtown.
Waxaan sidoo kale wali aqbalnaa tabaruca jeeg ahaan. Waxaad u diri kartaa jeeggaaga oo la bixin karo DT2, 3207 Meramec Street, St. Louis, MO 63118.
Filimka hoos DT2. Muuji dhamaan qeybaha. Covid-19, DT2, Dutchtown, Bandhigga Ganacsiga Dutchtown, Xisaabiyeyaasha, Beerta Marquette, Iyo UrbanMain. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay January 15th, 2022 .
DutchtownSTL.org DT2 Magaalo Dutch ah oo Adag Iyadoo loo marayo Faafida iyo Beyond